बुटवल पावरको नाफा १४.७३ प्रतिशत बढ्यो - Aarthiknews
बुटवल पावरको नाफा १४.७३ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत बढी चुक्तापूँजी कायम गरेको बुटवल पावरको नाफा १४ दशमलव ७३ प्रतिशत बढी भएको छ । कम्पनीले आइतवार सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख ८२ हजार कायम भएको हो । यस वर्ष कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस मार्फत चुक्तापूँजी बढाएको हो ।
आम्दानीमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष ५ दशमलव २७ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । गत वर्ष रू. ५२ करोड ९७ लाख ९९ हजार आम्दानी गरेको यो कम्पनीले यस वर्ष रू. ५५ करोड ७७ लाख ३२ हजार आम्दानी गरेको छ । आम्दानी बढेको यस कम्पनीको नाफा यस वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. ८९ करोड ५९ लाखभन्दा बढी भएको छ । यो नाफा गत वर्ष यसै अवधिसम्म रू. ७८ करोड ८ लाखभन्दा बढी थियो ।
कम्पनीको जगेडा कोष रकम यस त्रैमाससम्म रू. ४ अर्ब ५१ करोड ८० लाखभन्दा बढी कायम भएको छ । यस वर्ष गत वर्षभन्दा साढे ३ प्रतिशत बढी जगेडा कोष कायम भएको हो । कम्पनीको कुल सम्पत्ति रू. ८ अर्ब १७ करोड भन्दा बढी रहेको छ भने रू. ९६ करोड ८३ लाभन्दा बढी कुल दायित्व रहेको छ । यस त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३३ दशमलव ३८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २६८ दशमलव ३४ छ ।